Tapered roller amabombo - China Anrui Holding Group
Tapered roller amabombo ikakhulu athwale osabalalayo osabalalayo ezisekelwe futhi Axial imithwalo kuhlanganiswe. umthwalo Axial ethwele nomthamo umugqa owodwa tapered roller amabombo incike contact engela, okungukuthi, engela yangaphandle indandatho Raceway, aba maningi engela enkulu nokufezeka capacity.Tapered roller amabombo ziyakwazi ukuthela umthwalo Axial ohlangothini olulodwa zibe ukuze kukhawulwe Axial displacement shaft kanye nezindlu kwelinye direction. Kuqhathaniswa emincane contact ibhola amabombo, tapered roller amabombo ukulayisha umthamo ...
Tapered roller amabombo ikakhulu athwale osabalalayo osabalalayo ezisekelwe futhi Axial imithwalo kuhlanganiswe. umthwalo Axial ethwele nomthamo umugqa owodwa tapered roller amabombo incike contact engela, okungukuthi, engela yangaphandle indandatho Raceway, aba maningi engela enkulu nokufezeka capacity.Tapered roller amabombo ziyakwazi ukuthela umthwalo Axial ohlangothini olulodwa zibe ukuze kukhawulwe Axial displacement shaft kanye nezindlu kwelinye direction. Kuqhathaniswa emincane contact ibhola amabombo, tapered roller amabombo ukulayisha umthamo mkhulu, nokukhawulela isivinini uphansi. Tapered roller amabombo kabanzi izimoto, edonsa esigayweni, izimayini, yokusansimbi, plastic imishini kanye nezinye izimboni.
Amabombo Jwayelekile Layisha Eziyisisekelo factor Linganisa ball Ukunikeza
d D B, C Kr Kor fo Gresse Amafutha Cha Usayizi isisindo
32004 20 42 15 15 12 24,9 27.9 10.5 9500 13000 0,097
32208 40 80 24,75 23 19 79.5 93,5 19 4900 6600 0,558
Previous: Okunye amabombo ngezifiso
Olandelayo: 8AT1 Automobile amabombo
Ingadi Ithuluzi Bearings Factory
Ingadi Ithuluzi Bearings Umkhiqizi
Ingadi Ithuluzi Bearings Supplier
6909 Okunye amabombo ngokwezifiso
6808 Okunye amabombo ngokwezifiso